Cusmaan Axmed Rooble oo mar wasiir noqday oo geeriyooday
Allaha u naxariistee waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday Cusmaan Axmed Roobe oo ahaa wasiirkii ugu horeeyay ee maaliyadda Soomaaliya, ahaana nin maalqabeen ah Cusmaan Axmed Rooble.
Marxuumka, wuxuu ahaa wasiirkii ugu horeeyay ee Maaliyadda Soomaaliya, xilligii dowladdii madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Aadan C/lle Cusmaan (Aadan Cadde). Waxaana si weyn looga yiqiin magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Allaha u naxariistee Marxuum Cismaan Axmed Rooble waxaa uu lahaa Labo Shineemo oo magaalada Muqdisho si weyn loogaga daawan jirey Aflaamta kala duwan kuwaas oo kala ahaa Shineemo Afrika iyo shineemo Muqdisho.
Maanta ayaan alagu wadaa in lagu aaso magaalada London ee dalka Ingiriiska.